NAIKE ELIANA : IRAY IHANY NY PATRON-NAY DIA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – MyDago.com aime Madagascar
NAIKE ELIANA : IRAY IHANY NY PATRON-NAY DIA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Ny ray amandreninay sy ny patron-nay hoy ny Cst Naike Eliana teny amin’ny Magro Behoririka androany dia iray ihany. Tsy manana patron folo na na roa na telo izahay fa ny filoha Ravalomanana Marc ihany. Raha miteny izy hoe mandehana ianareo ankavanana dia mandeha izahay, raha miteny izy hoe mandehana ankavia, afovoany dia mandeha izahay. Tsy mandray baiko avy aiza izahay tavela ato am-bala. Matoa izahay tavela eto amintsika dia matoky azy ary izy ihany no andraisanay baiko.Raha misy ny fifidianana ka raha tsy avy amin’ny Filoha Ravalomanana Marc no manome tso-drano sy manolotra dia tsy manao izahay. Maro hoy Naike ny tsaho mandeha fa izay no fanazavana ho entiko amintsika.. Tsy hibilabila izahay.
Momba ny fifidianana dia nambarany fa tsy mbola anaty fandaharam-potoananay ny fifidianana. Nisy hoy izy ny tondrozotra nosoniavina koa hajainay ny natao sonia. Tsy mbola tanteraka io tondrozotra io. Noho izany dia tsy afaka hiroso amin’ny fifidianana isika raha tsy tanteraka ny andininy faha 16, avoaka ny gadra politika, izay mbola tsy tanteraka izany. Midika izany fa tsy mbola misy fitoniana. Toy izany ny andininy faha 17, ny faha 20 izay milaza fa miverina tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana Marc.Ny anaranay hoyNaike no tsy voatonona ao fa ny anaran‘y prezidà no ao amin’ny tondrozotra. Anarana roa no voalaza ao dia ny andininy faha3, ny anaran-dRajoelina sy ny filoha Ravalomanana Marc ao amin’ny andininy faha 20. Raha mboa tsy tanteraka io fa hoe ny andininy faha 3 tanterahana dia tsy hanaiky izahay. Ahoana hoy Naike no hirosoantsika amin’ny fifidianana. Marina fa voaangona ny vola, teknika mbola misy zavatra amboarina, ekenay izay fa ny lafiny politika dia mbola tsy tanteraka ny fitoniana. Noho izany raha hanao fifidianana malalaka, mangarahara, eken’ny rehetra dia apetraka io fitoniana io.
NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IHANY NO AN’NY VAHOAKA MALAGASY
NAIKA ELIANA : REHEFA MIVERINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC DIA MILAMINA TANTERAKA NY FIRENENA
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 mars 2013 Catégories Politique
19 pensées sur “NAIKE ELIANA : IRAY IHANY NY PATRON-NAY DIA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC”
Maheraza tompoko ;tsy moramora ny ady; Nadia mananana ny marina aza dia aoka vapetraka eo ampelatananan Driamanitra ;mirongatra nyratsy
Raha àolombelona dia efa kivy;kanefa hoy ny teninanan’andriamanitrahoe ;Ahy ny zavatra rehetra;raha izao nomiasa dia zava poana daholo izao rehetra izao
23 mars 2013 à 18 h 37 min
Je ne sais pas pas qui pourrait dire mieux ! Merci Naika Eliane.
23 mars 2013 à 20 h 14 min
EKENA 100% Ramatoa havana!!!
ho ela velona Ramatoa fa raha ianao no hatolotr’i Dada
REHEFA TONGA IZY dia tena MENDRIKA hitondra ny vahoaka Malagasy ianao.
Mankasitraka Tompokovavy hajaina!!ho tahian’i Zanahary ianao.
23 mars 2013 à 21 h 25 min
Misaotra Madame NAIKA Eliane, na NAIKE Eliane ! Tsy fantatra intsony ity ny tokony androatana ny anaranao, fa dia mety ê ! Mankasitraka ny aty !Ianao indray ity no voatery mitsangana !!
Fa izao fotsiny ê ! Ny bainga mivadika ihany no tadiavin’ny vahoaka amin’izao fotoana, ary tandremo ny mauvaises fréquentations !
Pantalon tahaky ny nanaovanao androany ihany hono fa aza manao « Jean », fa tsy matin-dry zalahy lolo ilay paozy !
23 mars 2013 à 23 h 05 min
Fa maninona kosa ???mafatifaty be ahy kosa izy @’ilay » Jean ».
Saingy ilay Kiraro dia tsy natao ho ahy mihintsy hihiiiii mety be! amiko aloha an!!
Izay azahoanao aina ihany kambony atao .
24 mars 2013 à 1 h 52 min
Tena miderara an’ity mpitolona iray ity mihitsy aho,fa izay ataony rehetra dia tena mifanandrify tsara @ ilaina y vahoaka sy ny filoha Ravalomanana . Fantany tsara ny toerana misy azy sy ny zavatra ataony. Tena manana tokoa i Dada manana ity sénatrice ity. Enga anie ka izy no hanome taratra ireo mpitarika.. Hafa ihany ny olona niantra sy manaja ny tena maha-Malagasy . Tohanana 300% mihitsy ianao,RAMATOA NAIKA ELIANE fa tena zanak’iDada hiringiriny.
….hafa ihany ny olona NIANATRA sy manaja ny tena maha-Malagasy…..
24 mars 2013 à 9 h 14 min
► LAZALAZAO dit :
tsy vitan’ny fianarana natao ihany fa ny fisainana sy ny tena fitiavana Tanindrazana no tena izy :
…ry Tantely mba « centralien »…ry Rajemison mba efa « 3eme cycle »….! nefa aiza izao ?
Ny filoha RAVALOMANANA dia ny fisainany no tena nampandoso an’i MADAGASIKARA
Misy olona manao « jean’s » nefa manana fomba fiainana mendrika ka misy hajana ihany!
Misy olona terana sy hafatotra anaty « complet » ka mihoatra ny tavy,ka moa va tsy toa « mafieux » mihoatra ny « italien »!
Misy ny « 3 poches » fotsiny dia mety hampilamina ny saram-babem-bahoaka!
Misy ny « lava robe », tonga dia « mi-culpabiliser » ny ondry maron-draPasy sy daMompra!
« Signes extérieurs » daholo re ireny mba hanafenana na hanampiana ny tsy ampy ao anaty satria izay ny jadona vokatry ny demokrasia ka samy maka ny rirany mafanandrify @ tanjan-tsainy e!
Tadidinareo ny fanaratsiana natao ny filohantsika @ fomba samihafa ve?
Ny azy ny fomba fijery sy fisainana dia afa indrindra sy tokana hatrizao satria nahasahy izy nanokatra saina hijery ny fomban’ny firenena afa fa tsy » france renin-dozatra » efa nanalika taonjato roa mahery izao sa mihoatra?
Ankoatry io fifehezana fijery maro, toy ny any filohantsika io, dia mbola ho mafy ny « recolonisation » efa hampitoeriny frantsay raha vao nikasa hanapotika ny filoha M.Ravalomanana ry zareo nanomboka 2002!
Ka ndao re mba hiova fa sao hanenenana ny hampody maika ny filoha izay mety mbola hiasa irery indray ka ho vonoiny frantsay mihintsy anie e!Ry zareo aza mifamono ankitsirany na ankolaka…ka izay « galasamy » be vavaka sy taraina ve hisy lanjany e????
MdRrrr ! Ampodio haingana ny Patron handehanan’ny sasany any @ privé tokoa ka !!!
24 mars 2013 à 13 h 49 min
Toa lasa vinany ianao ra-Zafy a???!!! Mahaiza tsara misaina sao lasa angidina e !http://mydago.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG_8230.jpg
Ranja Randria dit :
Misaotra anao tompoko nametraka tsara sy mazava ny tenim-pahendrena!
Tohanan-tsika izy ê ! Fantatra ny zavatra rehetra nataony, nandritry ny fotoana nijanonany taty ivelany, ary mbola manohy ny asany izy any an-toerana !
Mila andian’olona toa an-dry Manoela « miaraka » mitolona marina aminy, fa tsy hoe « mpanohan’azy » !!
Momban’ilay fitafy indray, vazivazy ny ahy na dia kianin’ilay ranamana aza ilay « jean » !
Hoy aho hoe : L’habit ne fait pas le moine !
Ny « ma soeur » aza efa niala tamin’ny rebareba ny sasany, ary misy mihintsy aza manao « jean sy blouson cuir » eny an-dalana ! Véridique !!
Iray ihany tokoa ny filoha
Nahoana tokoa moa no tsy ho iray ny Filoha? Raha tsy izany dia tsy tokony anao politika ny malagasy. Mbola @ io anaran’ny Filoha io aza anie no entintsika manantanteraka izay adidy nankininy tamintsika e. Raha mety misy hevitra tsy hitovizana aminy aza dia tsy maintsy mahay miteny hoe : » Eny ary andriamatoa Filoha fa rehefa izay no hitanao fa mety dia hiezaka ny hampizotra ny asanay araka izay fijerinao izay izahay ». Tsy efa izay ve no natao rehefa nilaza ny filoha Ravalomanana fa tsy hilatska? Tsy jadona izany na hoe fijerena olon-tokana fa fomba fiasa amim-pahalalana sy fahendrena. Sady « teny nierana » no maha eo io Filoha io fa tsy tongatonga ho azy teo. Rehefa mahay mijery toan-dry Rtoa Naike Eliane izao daholo ny mpanao politika malagasy sy ny olom-boafidy rehetra na ny eo @ fitondrana na ny mpanohitra ny fitondrana dia azo antoka fa mahalala ny lalan-kalehany izy ireo fa tsy hanaotao foana mampivarina ny firenena ankady intsony.
Ekena fa hitondra sy hanova zavatra be dia be ny fahatongavan’Atoa Marc Ravalomanana. Ary io no hatahoran’ny hat.
Ny ahy kosa ny fomba fijeriko ary efa fijerin’ireo razambeko namoy ny ainy ho an’izao firenena izao, nandritra ny fanjanahan-tany sy tamin’ny fahampanjaka, dia ny firenena sy ny soa ho azy no mandidy ahy. Raha mandalo amin’Atoa Marc Ravalomanana izany dia azo atao tsara ny miara-miasa aminy.
Précédent Article précédent : Ankolafy Ravalomanana : Nampiseho ny firaisankina tany Manjakandriana
Suivant Article suivant : ANDIAN-TSARY MAGRO « MILAY »